50W N'èzí Osimiri Mgbasa anyanwụ Park Lighting China Manufacturer
Nkọwa:Ala na-acha ọkụ ọkụ,Mpempe Ntugharị Mgbasa Okpomọkụ nke Na-acha,Okpomọkụ n'èzí n'èzí
Home > Ngwaahịa > Ebube Ogologo > Mbara Igwe > 50W N&#39;èzí Osimiri Mgbasa anyanwụ Park Lighting
N'ehihie, ìhè nchara nke anyanwụ na -agbanwe ma na-enwu gbaa ọkụ na-acha ọkụ ọkụ site na mpempe mmiri mmiri ozuzo na-egbuke egbuke nke 140 lumens na ụgwọ zuru ezu.
Nke a na- emepe ntọghata nke okpokoro ga-agbanye na akpaghị aka mgbe anyanwụ dara ma gbanyụọ mgbe anyanwụ rutere. Ọ bụrụ na ogwe ndị ahụ anaghị enweta anyanwụ zuru ezu iji kwụọ batrị ahụ ka ọ dị ike, gbanwee ọnọdụ ìhè na-enwu gbaa na ọnọdụ akụ na ụba iji gbatịkwuo ogologo oge. Ewezuga inye ìhè na njedebe dị elu karị, anyị mara Mgba Igwe Okpomọkụ Ọpụpụ nke anyanwụ maka ọdịda anụ ahụ ha. A na-echebe ogidi igwe site na ihu igwe na-eguzogide na-enyere aka hụ na a pụrụ ịdabere na ya ogologo oge. Ogwe n'elu ligh t gụnyere lisrị batrị Lithium-ion nke dị mma maka ihe dịka 1,000. Tụkwasị na nke ahụ, oghere ogwe ọkụ anyanwụ nwere afọ ise (afọ 50,000), na-adịgide ndụ nke unit nke dị afọ 4.
20w na-emepụta ihe ọkụ ọkụ Kpọtụrụ ugbu a
50w Ngosipụta OZIRI SOLAR SOLAR Kpọtụrụ ugbu a
20w N'elu n'èzí Kpọtụrụ ugbu a
50w N'elu mbara igwe na-enwu enwu Kpọtụrụ ugbu a
IOT Na-achịkwa Ngwá Ọrụ Na-enwu Azụ Kpọtụrụ ugbu a
50W Ikwa nchịkwa mere ka ìhè dị na mbara igwe Kpọtụrụ ugbu a
20W ìhè nke okirikiri na-achịkwa anyanwụ Kpọtụrụ ugbu a
Ala na-acha ọkụ ọkụ Mpempe Ntugharị Mgbasa Okpomọkụ nke Na-acha Okpomọkụ n'èzí n'èzí Ndị na-acha ọkụ ọkụ Ike Igwe na-acha ọkụ ọkụ Isi ala na-agbanye ọkụ ọkụ Ala 50W na-acha ọkụ Mpị ọkụ na-acha ọkụ ọkụ